DHAGEYSO: Guddoomiye Mursal ‘‘Maamul Goboleedyada go’aan kama gaari karaan doorashada Soomaaliya ka dhaceyso‘‘
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka horyimid war-muriyeedkii Axadii laga soo saaray wejiga 1aad ee shirka Magaalada Dhuusamareeb, oo ku baaqayay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, maadaama Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka hababkii ay soo bandhigeen, ay u baahan yihiin muddo dheeri ah, Madaxda Dowladda iyo kuwa Maamul Goboleedyadana ay ka wada hadlaan nooca doorasho ay tahay in dalka laga qabto.
Guddoomiye Mursal, ayaa sheegay inaanay aqbali doonin doorasho dad-ban, iyadoo Golaha Shacabku ansixiyay Sharcigii Doorashooyinka Qaranka.
Guddoomiyaha oo maanta ka hadlayay Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in sanadkii 2016 aanu dalka lahayn sharci doorasho, balse hadda oo la jooggo 2020 uu dalku leeyahay sharci doorasho.
Mursal, ayaa waxa uu sheegay in xaalado kala duwan uu dalka soo maray xiiliyada doorashooyinka, isagoona soo hadalqaaday in muddo dheer lagu soo jiray nidaamka doorashada dad-ban, hadda oo dalka uu leeyahay sharci doorasho, oo Madaxweynaha Qarankana uu saxiixay aan loo baahnayn in dood la geliyo.
Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay, in dhibaato amni ka dhalan karto, haddii dib loogu noqdo doorasho dad-ban. Wadankan buu yiri amni la heli maayo, illaa doorasho toos ah ka dhacdo.
Dhanka kale waxaa uu Gudoomiye Mursal ka hadlay tagistii uu shalay Magaalada Dhuusamareeb tagay Gudoomiye Kuxigeenka 2aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, kaasoo uu sheegay inaanu metelin Golaha Shacabka, isla-markaana uu si iskiis ah u tagay magaaladaasi.
Ugu dambeyn, gudoomiye Mursal oo qudhiisa qorsheynayay in uu taggo Magaalada Dhuusamareeb ayaa markaliya laga war helay diidmada adag, ee uu uga horyimid dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira Magaalada Dhuusamareeb.
Halka hoose ka dhageyso Codka Guddoomiye Mursal:
Tags: gudoomiye mursal, lama aqbali doono doorasho dad-ban